Wednesday June 12, 2019 - 07:37:13 in Maqaallo by Wariye Tiriko
"Baroortiyo warkaagaa la mida, ruux badweyn gelaye”
Markii weydiimaha ku saabsan Kalagooye laga soo tebiyay warbaahinta, waxa soo qaadatay hadal khudbaddaada ku jiray oo aad ku dartay qayb aan khubaddaada ku jirin. Qaybta cusub, waxa aad tidhi "Maanta Somaliland waa aynu ka baxnay marxaladii oo dadkii waxa ay doorteen in wax loo qabto. Wax faraq qof loogu rido, in qaranka wax loo qabtaa baa ka quman oo is la qaadnay. Dhabbada maanta ee waxqabadka, horumarka iyo dawladnimadaa baa la haynayaa”. Waxa ay u muuqatay inaad ka gabbanayso fashilka aad masuulka ka tahay ee Kalagooye, adiga oo ku dhuumanaya far! Ummadda waxa aan ka raalli-gelinayaa inaad ka baydhay ujeeddadii dhambaalka kugu socday. Cid wax ku weydiisay ma jirin. Sababta aad khudbaddaada uga soo qaadatay intaas ayaa xitaa is-weydiin leh!